HomePage – TimeLine Layout – Complete Nepali News Portal
मानीस सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न हामि किन जन्मन्छौ अनि किन मर्छौ ? जन्मेको किन होला ? आफै जानी जानी जन्मेको त पक्कै होईन होला ? जन्मको प्रयोजन के होला ? यत्रो दुख दिनुथियो भने किन जन्मेको ? के अर्थ छ यो सुख दुख भोग्नमा ? कस्ले गराएको होला यस्तो ? …
(राजनिती एज ले होईन एजेन्डा ले गर्ने हो) वामी को मेरो सम्बोधन मा गर्नु भएको कमेन्ट प्रती सबै मा हार्दिक धन्यबाद ! * ५६ बर्ष को पुष्पकमल दाहाल लाई ८६ बर्ष को गिरिजा प्रसाद ले नेतृत्व दिएर शान्ती प्रकृया मा ल्याए ! * हिलारी भन्दा उमेर ले पाको ट्रम को …